१५ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चैत २५ देखि टाइफाइड खोप || जीवनशैली
१५ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चैत २५ देखि टाइफाइड खोप
काठमाडौं । १५ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड खोप लगाइने भएको छ । सरकारले चैत २५ देखि बैशाख १८ सम्म बालबालिकाका लागि टाइफाड खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको खोप अभियान नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा वडा कार्यालयमा हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसअनुसार बालबालिकालाई निशुल्क टाइफाइड खोप प्रदान गरिनेछ ।
टाइफाइड ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिसामा हुने जिवाणु वा दुषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्दछ । यो रोग सबै उमेर समूहको व्यक्तिहरूमा लागेको पाइएको छ । विशेष गरी १५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा धेरै हुने गर्छ।
डाइफाइड हुँदा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने हुन्छ । त्यस्तै पेट दुख्ने, पखाला, वाकवाकी तथा शरीरमा रातो बिमिरा आउने पनि यसका लक्षण हुन् ।
टाइफाइड खोप लगाएपछि रातो हुने, सुन्निने र दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हात गोडा तथा जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छन् । खोप लगाएपछि यी बाहेक अन्य जटिलता देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु पर्दछ ।
अनियमित महिनावारीको समस्या छ ? यसरी गर्नुस् घरेलु उपचार ?
आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? यसरी चिन्नुहोस् स्वादिष्ट र विषादीयुक्त आँप
पार्टनरसँग पहिलो रातको डर !
गौतम बुद्धको प्रेरक विचार, जसले तपाईंको जीवन बदल्न सक्छ !